Ama-FAQs - I-Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Inkampani - Jikelele
Isilinganiso kanye nobunjiniyela
Uma nginenkinga yokudizayina, i-JWT Rubber ingangenzani?
Unganqikazi ukubiza umnyango wethu wokuthengisa onolwazi noma wobunjiniyela. Uma udinga usizo lokuklama kusuka kunjiniyela bethu, mane uxhumane nathi.
Ngisebenza kuphrojekthi entsha. Ngingathola amasampula ku-JWT?
Yebo, sinohlelo olungabizi kakhulu lwama-prototypes nama-run amancane. Sicela ukhulume ngokuthengisa kwethu.
Yini izidingo ze-oda le-JWT Rubber?
Ngoba kufanele sikhiqize le ngxenye, i-MOQ incike kwimikhiqizo ehlukile.
Ngingathola ukubheka izikhungo zakho?
Yebo, sicela usishayele ukuhlela i-aphoyintimenti yokusivakashela noma ukusicwaninga. Ngenkathi ulapha, sizokujabulela ukukukhombisa owethu
indawo yokukhiqiza kanye nomnyango wethu Wokulawula Ikhwalithi.
Sitholakala engekho # 39, uLianmei Second Road, Lotus Town, Tong 'an District, Xiamen City, esifundazweni saseFujian, China.
Ngixhumana kanjani nawe?
Sicela uthumele umbuzo ojwayelekile kwifomu lethu lokuxhumana eliku-inthanethi noma usishayele ku +86 18046216971
Uma unemibuzo eyengeziwe sicela ubuze ochwepheshe. Siphendula kuzo zonke izicelo zethu eziku-inthanethi kungakapheli amahora angama-24.
Ingabe unayo ibutho eliqondile lokuthengisa noma unazo izimpendulo zomenzi?
UTimco Rubber usebenzisa ibutho eliqondile lokuthengisa elihlanganisa zonke izifunda zezwe. Asithengisi ngabamele abakhiqizi.
Ingabe unganikeza ikhathalogi yezingxenye ozihlinzeka njengamanje?
Asikhiqizi ikhathalogi ngoba sinikezela imikhiqizo enjoloba eyenziwe ngokwezifiso enziwe emidwebeni yamakhasimende ethu noma ethize kwisicelo sabo.
Ingabe unjiniyela onjiniyela?
Akunabo onjiniyela kubasebenzi. Kodwa-ke, ngobuchwepheshe bethu obubanzi nesipiliyoni sokwenza amarabha, abasebenzi bethu banolwazi olufanele nokuqeqeshwa ukukusiza ekukhetheni okulungile izinto zenjoloba ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Unesikhathi esingakanani ebhizinisini?
UTimco Rubber wasungulwa ngo-1956.
Inkulu kangakanani inkampani yakho?
UTimco Rubber yinkampani ephethwe futhi enomuntu ngasese. Sincane ngokwanele ukusabela ngokushesha futhi sinikeze insizakalo yamakhasimende esheshayo, kepha sikhulu ngokwanele ukuqinisekisa ukuthi uthola imikhiqizo kanye nensizakalo oyidingayo ngaso sonke isikhathi.
Ithini i-oda lakho elincane?
Ngoba yonke imikhiqizo yenziwa ngokwezifiso, i-oda elincane lizoya ngokuthi ingakanani i-batch yenjoloba ezothela engxenyeni oyicelile.
Ingabe uyawapha impahla?
Asisiwo umphakeli wezinto ezibonakalayo, noma kunjalo, singakwazi ukukusiza ngezidingo zakho ezibonakalayo uma zikushidi noma kuluhlu.
Yini okudingeka kimi ukuze ngisungule i-akhawunti njengekhasimende?
Sidinga izinkomba zesikweletu neminye imininingwane yokuxhumana yenkampani ejwayelekile.
Ungangithumelela ifomu lakho lezinkomba zesikweletu?
Sicela usithumele i-imeyili ku info@timcorubber.com noma Chofoza lapha kwesicelo Sesikweletu.
Ngisithola kanjani isilinganiso sesilinganiso?
Thumela okubuzayo futhi ukudwebe kuye sale@timcorubber.com noma vakashela Cela isigaba se-Quote yewebhusayithi yethu.
Iziphi izinhlobo zezingxenye zerabha ozihlinzekayo (isib. Extruded, molded, njll)?
Siyaphaka okwenziwe ngokwezifiso, ikhishwe, die cut and lathe usike izingxenye zenjoloba, kanye namapulasitiki akhiqizwayo.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezitholakala kuTimco Rubber?
Sisebenza ngezinto eziningi ezahlukahlukene, kufaka phakathi I-EPDM, neoprene, abicah, i-nitrile, i-butyl, I-SBR, isoprene (irabha yemvelo yokwenziwa), IViton®, i-PVC eqinile futhi eguquguqukayo, kanye nezinhlobo ezahlukahlukene ze isiponji.
Yimiphi imakethe ehlukene esebenza yiTimco Rubber?
Sisebenza ngamakhulu ezinkampani ezinkampanini eziningi, kufaka phakathi I-HVAC, uhlelo lokusebenza, imishini esindayo, amathuluzi wamandla, tier 2 yezimoto, ukuzijabulisa, ukwakhiwa, ukuhamba okukhulu, iminyango ye-lifti, futhi imishini yokuphepha kagesi.
Kungani ukucaphuna kwami ​​kufundeka, "Imali yokusebenzisa amathuluzi kancane?"
Ngokujwayelekile, uTimco Rubber ugcina ubunikazi bokusebenzisa amathuluzi kucashunwe. Singacaphuna amaphesenti ayi-100 wezindleko zokusebenzisa amathuluzi uma ufisa ukuthola ubunikazi bokusebenzisa amathuluzi.
Yiluphi ulwazi oludingayo ukuthola isilinganiso esinembile kunazo zonke?
Ukuthola isilinganiso esifaneleke kunazo zonke, kuzodingeka unikeze: Ukusetshenziswa Okulinganiswayo Kwonyaka, Okucacisiwe kwethebula, kanye nomdwebo noma incazelo ingxenye yerabha.
Uwehlisa nini amanani akho?
Nini izinhlanganisela zenjoloba bawa futhi babukeka beqhubeka nokuhlehlela phansi kuze kube sezingeni lokuthi abagunyazi behlise amanani entengo, iTimco izokwehlisa amanani entengo. Ngokunokwenzeka lokhu kungenzeka ngemuva kokunyuka kwezakhi zenjoloba okuholele ekukhuphukeni kwentengo.
Kungani kuthatha amasonto angama-4-6 ukusebenzisa amathuluzi namasampula?
Isikhathi sokuhola amathuluzi nesampula singamaviki angama-4-6 ngoba ithuluzi kumele kuqala likhiqizwe. Kukhona isivivinyo kuthuluzi futhi esikhathini esiningi kufanele kube khona ithuluzi elisha elenziwe noma i-tweak eyenziwe kulamathuluzi akhona. Lokhu kungathatha izikhathi ezimbalwa ukuthola ingxenye efanele. Lapho ithuluzi selilungile, lapho-ke kufanele sigijime amasampula futhi sithole wonke amadokhumenti asekelwayo alungiselelwe futhi elungele ukuthumela kuwe ukuze kuvunyelwe ingxenye.
Ingabe unayo impahla egcwele eshalofini?
Cha, uTimco Rubber akagcini izinto zenjoloba eshalofini.
Yini inqubo ukuthola ikhotheshini?
Sicela unikeze ukuphrinta noma isampula lengxenye yakho ukuze libuyekezwe. Ukuze usize ekwakheni ithuluzi, sicela ufake phakathi izidingo zakho zonyaka zokulinganisa. Uyacelwa ukuthi ukhombise okubalulekile, uma impahla ingacaciswanga noma ingaziwa, sicela uchaze imvelo ezosetshenziswa kuyo.
Ingabe i-JWT ingasiza ekwakhiweni kwengxenye yerabha yangokwezifiso yami?
I-JWT Rubber Molding ingasiza esigabeni sokuqala sokuklama ngayo yonke indlela ngokuvumela kwakho kokugcina kwengxenye.
Kuthiwani uma angazi ukuthi iyiphi polymer noma durometer efanelekela isicelo sami?
Isipiliyoni sethu sokwenza isikhunta senjoloba sizokusiza ekunqumeni i-polymer efanele yesicelo sakho kanye nezidingo zakho durometer.
Yini isikhathi sokuhola lapho ngifaka i-oda edinga ithuluzi?
Isikhathi esijwayelekile sokuhola samathuluzi we-prototype ngamaviki angama-2-4. Ukuze usetshenziselwe ukukhiqizwa kokucindezela kokukhiqizwa, isikhathi sokuhola singamaviki angama-4-6. Isilinganiso sethala lokukhiqiza injekishini yokujova enjemeni singamaviki angama-4-6. I-JWT iyaqonda ukuthi kungenzeka kube nezimo ezizodinga ukuhanjiswa kwamathuluzi okuhola okuthuthukile futhi sisebenza nesitolo sethu samathuluzi ukufeza izidingo zamakhasimende.
Ngabe ukwenziwa kwami ​​amathuluzi kwenziwa eChina?
I-JWT ithenge okungu-100% ukusetshenziswa kwayo eChina okuvumela izikhathi zokuhola ezisheshayo nezimpendulo ezisheshayo ezishintsheni zokwakhiwa kwamakhasimende.
Siyini isikhathi sokuhola se-JWT?
Ukusuka kokuthola i-oda, ngokuya ngobuningi be-oda, izingxenye eziningi zingathunyelwa ngezidingo zakho ze-oda emavikini angama-3-4.
Ingabe i-JWT ingasebenzisa amathuluzi asele ekhona?
Ezimweni eziningi, ukusebenzisa amathuluzi kuzongena emishinini yeJWT ngezikhathi ezithile ukuguqulwa kwamathuluzi amancane kungadingeka.
Lapho sengikhokha amathuluzi wokubumba enjoloba, ubani ongumnikazi wezinto ezisetshenziswayo?
Amathuluzi wokwenza izinto ngokwezifiso zamakhasimende ethu ngakho-ke impahla yamakhasimende ethu uma sekutholwe inkokhelo.
Ngokwenza irabha kwizinsimbi ezihlanganayo zensimbi ingabe i-JWT ingathola izinsimbi zami zensimbi?
I-JWT isebenza ngamaketanga amaningana okuhlinzeka ukuze kukhishwe isitampu sensimbi esidingekayo noma ukufaka ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka.
Ingabe i-JWT ingalinganisa izidingo zami zombala wangokwezifiso?
I-JWT Rubber Molding ingalinganisa nanoma yimuphi umbala oceliwe. Sisebenza nabahlinzeki bethu benjoloba ukuhlinzeka ukufana kombala okuqondile.
Ingabe inkampani yakho isethelwe ukusekela uhlelo lwe-KANBAN?
Yebo sikhona. Njengamanje sihlinzeka Izinsizakalo zeKhanban kumakhasimende ethu ambalwa.
Ingabe uhlelo lwekhwalithi yenkampani yakho lwe-ISO luqinisekisiwe?
Ngokuziqhenya, siyikho. Ukuqinisekiswa kwethu kwezindinganiso ze-ISO kuqale ukusebenza kusuka ngo-1998. UTimco Rubber uyinkampani eqinisekisiwe ye-ISO 9001: 2015.
Unawo amandla okwenza i-rub-to-iron bonding?
Yebo. Izingcezu zezinhlanganisela zenjoloba-kuya kwensimbi esizinikezele okwamanje ezihlinzeka ngohla kusuka kokuncane - ngaphansi kwesentimitha ububanzi - ukuya kukhulu kakhulu - ubude obungaphezu kuka-1 ubude.
Ingabe ungasebenzisa ithuluzi lethu elikhona kumishini yakho?
Kwezinye izimo, yebo. Singase sikwazi ukusebenzisa ithuluzi lakho elikhona ngokuya ngezici eziningana, ezifaka uhlobo, usayizi kanye nobudala bokubumba. Sicela uqinisekise ukusho ukuthi unethuluzi elikhona lapho ukhuluma nommeleli wakho wokuthengisa weTimco Rubber.
Ingabe uyazigcina izingxenye?
Ngoba iningi lethu izingxenye zokwenza irabha ngokwezifiso zenziwe ngamathuluzi aphethwe ngabathengi, thina ngokwejwayelekile asenzi njengenkampani yokuthengisa amasheya. Kodwa-ke, sinazo ezinye izingxenye ezisetshenziswa kaningi okungenzeka ukuthi sizithenge njengama-plugs, ama-grommets kanye neshubhu ethile. Futhi singaba nezingxenye zesitoko eziqondene nezidingo zakho, esikwenzela amakhasimende amaningi manje. Sithumela futhi sikhulule ngohlelo lwakho ngalunye.
Yisiphi isikhathi esiholayo esicelweni sesilinganiso sesilinganiso?
Isikhathi sokuhola sesilinganiso se-a umkhiqizo owenziwe ngenjoloba yizinsuku eziyi-5 kuye kwezingu-7. Isikhathi sokuhola se irabha ekhutshiwe noma die cut ingxenye cishe izinsuku ezintathu kuya kwezi-5 zebhizinisi.
Yisiphi isikhathi sokuhola samasampula kanye nokusebenzisa amathuluzi?
Isikhathi sokuhola samathuluzi namasampula kuvame ukuba ngamaviki amane kuya kwayi-6 isampuli ekhutshiwe kanye namaviki ayi-6 kuye kwayi-8 isikhunta namasampula.
Yisiphi isikhathi sokuhola sezingxenye zokukhiqiza?
Izingxenye zokukhiqiza zenziwa ngokuya ngokuvunywa kwamasampula. Ngomkhiqizo osikiwe / wokufa osikiwe, isikhathi sokuhola singamaviki amane kuya kwayi-5 futhi izingxenye ezibunjiwe zingamaviki amahlanu kuya kwayisithupha wokukhiqizwa.
Yebo, senza ama-PPAP. Le mininingwane kufanele idluliselwe ku-Timco Rubber lapho isicelo sekhotheshini sithunyelwa, kanye neminye imininingwane ephathelene (okusho, ukuhlolwa) kwifomu / ukulingana / ukusebenza kwengxenye.
Ingabe usebenza ngenjoloba yesiponji?
Yebo siyasebenzisana isiponji, kokubili ukukhipha futhi kubunjiwe.
Ngabe usebenza ngamapulasitiki?
Yebo sisebenza ngamapulasitiki, womabili ama-extrasion futhi abunjiwe.
Ingabe unabo oxhumana nabo abangaphesheya kwezilwandle?
Yebo, sinoxhumana nabo abangaphesheya kwezilwandle.
Hlobo luni lwezinhlelo zokusungula olunikezayo?
Njengamanje sibamba iqhaza kunokwehluka okuningi Izinhlelo zokusungula, kufaka phakathi iKanban kanye nokuya emsebenzini.
Ungasiza ekunqumeni i-polymer ne durometer efanele ngohlelo lami lokusebenza?
Yebo, iqembu lethu lochwepheshe elinolwazi lingakuhola ekunqumeni okufanele uhlobo lwenjoloba noma i-polymer ngokususelwa kuhlelo lokusebenza nendawo okuyo kuvezwa kuyo ingxenye yakho.
Ungakwazi ukuthumela i-oda lami ngokuqondile kumakhasimende wami?
Yebo, ngaphansi kwezimo eziningi.
Kungani kufanele 'ngisayine' kulezi zingxenye zangaphambi kokukhiqiza / isampula ngaphambi kokuthi i-oda lokukhiqiza ligijime? Ngidinga lo-oda ASAP!
Umuntu angahoxisa ilungelo lokuvunywa kwesampula, kepha ngokwenza lokho ubuye ulahle amalungelo alandelayo wokuguqula noma wokulungisa ingxenye ngaphambi kokukhiqiza uqobo.
Izingxenye zami zidinga umhlangano olula. Ingabe i-Timco inikeza umhlangano olula ezingxenyeni noma emaphaketheni?
Yebo, sinikeza umhlangano olula kuzo zombili izingxenye namaphakeji.
Ngingakwazi yini ukuguqula izindleko zami zokusebenzisa amathuluzi entengo ye-oda lami lokuqala?
Yebo. Izindleko zamathuluzi zingahunyushelwa entengo yengozi.
Angifuni ukuthenga ukusebenzisa amathuluzi, ngingazithola kanjani izingxenye?
Izingxenye eziningi zizodinga ukufakwa kwamathuluzi amasha. Singaba nakho izingxenye zenjoloba ezivame kakhulu futhi ukusetshenziswa kwamathuluzi sekuyatholakala. Kuzofanele ukhulume nabasebenzi bethu ukukusiza ngale nqubo.
Uhlobo luni lokubekezelela ongabamba ngalo ezingxenyeni zakho zerabha ezikhiqizwayo?
Ukubekezelela kwethu izingxenye zerabha ezikhutshiwe kuzoncika ohlelweni oluthile. Singacaphuna ukubekezelela okufanele uma isicelo sinqunywe.
Uhlobo luni lokubekezelela ongabamba ngakho ezingxenyeni zakho zenjoloba ezibunjiwe?
Ukubekezelela kwethu izingxenye zenjoloba ezibunjiwe kuzoncika ohlelweni oluthile. Singacaphuna ukubekezelela okufanele uma isicelo sinqunywe.
Uhlobo luni lokubekezelela ongalubamba ezingxenyeni zakho zenjoloba ezafa?
Ngokuya ngohlelo lokusebenza singabiza ukubekezelelwa okufanele kwakho die cut irabha ingxenye.
Iyiphi durometer ephansi kakhulu ongayicubungula?
Imingcele ye-Durometer izoncika kuhlobo lwe ingxenye yerabha okudingayo:
Izingxenye ezengeziwe - durometer engama-40
Izingxenye ezibunjiwe - ama-durometer angama-30
Yini durometer ephezulu kakhulu ongayicubungula?
Izingxenye ezinwetshiwe - durometer engama-80
Izingxenye ezibunjiwe - ama-durometer angama-90